Kopisha cat | Slot elinuka £ 5 + £ 500 MAHHALA! Kopisha cat | Slot elinuka £ 5 + £ 500 MAHHALA!
Kopisha Cat is an online slot game okusekelwe isihloko ezimibalabala isilwane amakati ukuthi ungadlala ngesikhathi Elinuka Slots Site. Lo mdlalo siqukethe paylines amabili nanhlanu kanye itolitji emihlanu ngezindlela ezihlukahlukene Yokuwina. I slot isethwe ngenhloso endaweni idolobha kanye amafulethi ngemuva. Nge ingqikithi nice ikhathuni isitayela omculo we-jazz, uqiniseka ukujabulela lo mdlalo kulo. Kukonke, umdlalo inikeza cartoon theme nge funny ngifuna amakati ukugcina ujatshuliswa. I ukubheja iqala nge £ 0.01 kodwa lucky day yakho, ungazama max yayo umkhawulo ka £ 250 spin.
Mayelana nonjiniyela Kwekhophi Cat
Lokhu emangalisayo umdlalo isilwane amakati evumelanisiwe ukuthi ungadlala ngesikhathi Elinuka Slots Site yasungulwa ngu NetEnt. Ngamakhulu ethandwa slot imidlalo kusukela Emashumini amabili eminyaka adlule ukuthi idlalwa emhlabeni wonke, bamane nje akudingi isingeniso.
Lo mdlalo izici ezithile ihluzo ocebile futhi emibalabala izimpawu zamakati ezimibalabala. Kukhona amakati ezihlekisayo obomvu, uthukuthele blue namakati cute pink amakati kanye nezimpawu ibhodlela lobisi, igundane ithoyizi futhi ithambo inhlanzi. Ikati obomvu liwuphawu udinga ufune ukunqoba wenkokhelo max of 200 Izikhathi ukubheja yakho. I ongaphakeme uhlamvu lwemali lwenani izimpawu zalesi umdlalo ungadlala ngesikhathi Elinuka Slots Site kukhona mikhondo isidladla. Kunezinto ezimbalwa nezimpawu ezikhethekile ezisiza wena uvule ibhonasi sici umdlalo. Ziyakwazi insimbi cat futhi uphawu segolide ikati Umfanekiso.
Ibhonasi Wild: I segolide uphawu ikati yinkulumo sasendle ihlanganisa bonke amatshwayo kuphela insimbi chitha. Wild kungaba avele embondelene esondweni kuqala futhi uma enza, zonke izimpawu cat on itolitji 2 ukuze 5 babe wilds kakhulu. Ngakho ungakwazi ukunqoba imivuzo omkhulu uma lokhu kwenzeka. Ngisho uma noma yikuphi kulokhu ikati izimpawu ezintathu zibukeka kahle zabekwa phezu esondweni lokuqala, omunye amakati nangebala iba zasendle futhi lokhu kunikeza imali enhle imivuzo kakhulu.
Chitha Ibhonasi: Uma udlala lo mdlalo ngesikhathi Elinuka Slots Site ungakwazi uhlaselwe isici sokuchitha izimpawu ezintathu insimbi lokubikezela. Wena ke ukhishwa eziyishumi osebenzisa free kanye lezi osebenzisa kungenziwa kabusha kwabangela kunini.
Isifinyezo: Lona umdlalo eyingqayizivele kakhulu futhi funny ungadlala ngesikhathi Elinuka Slots Site. Nge ezihlukahlukene amabhonasi kanye nekhono ukuguqula zonke izimpawu oluyisisekelo lube zasendle, ungakwazi kalula alindele ukunqoba imivuzo omkhulu nge ambalwa osebenzisa lucky lapha.